Orinasa zezika phosphate, mpamatsy - mpanamboatra zezika zezika China
Amin'ny maha zezika azy dia mety indrindra ny manisy fosfat Monoammonium mandritra ny fitomboan'ny vokatra. Monoammonium phosphate dia asidra amin'ny tany, ary ny akaikin'ny masomboly dia mety hisy vokany ratsy. Amin'ny tany misy asidra dia tsara kokoa noho ny calcium sy amonium sulfate izy io, fa amin'ny tany misy alkaly. Izy io koa dia ambony noho ny zezika hafa; tsy tokony afangaro amin'ny zezika alkaly izy io mba tsy hampihena ny fahombiazan'ny zezika.
Monopotassium Phosphate MKP raha fintinina, formula NPK: 00-52-34. Ity dia vokatra maimaim-poana avy amin'ny kristaly fotsy ary fantatra ho loharano mahomby indrindra amin'ny sira fosfat sy potasioma. Mety amin'ny fanondrahana rano mitete, fanosehana, ravina ary hydroponics, sns. Ampiasaina ho zezika fosfat-potasioma potasioma faran'izay tsara amin'ny fambolena; Ny vokatra Monopotassium Phosphate dia be mpampiasa amin'ny ankamaroan'ny karazan-java-maniry toy ny karazana fambolena vola, voamaina, voankazo, legioma, sns.
Ny zezika DAP dia ampiasaina amin'ny ankapobeny ho toy ny akora misy fatran'ny zezika mitambatra nitroka sy fosfor. Izy io koa dia zezika iray izay mampiakatra vetivety ny pH amin'ny tany (fototra kokoa). Izy io dia iray amin'ireo akora lehibe indrindra amin'ny otrikaina sy energizers misy masirasira rehetra, izay loharano fototry ny Nitrogen sy Phosphate. Izy io dia zezika mahomby be mpampiasa amin'ny legioma, voankazo, vary ary varimbazaha.
Amin'ny maha-zezika mahomby azy, ny urea phosphate dia misy fiatraikany amin'ny zavamaniry amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana sy antonony, izay tsara lavitra noho ny zezika nentim-paharazana toy ny urea, phosfat amonium, ary fôfatà diôdrogen potasioma.